Socket Plug Socket, Connector Adapter, Furaha Degdegga ah - NBC
12 Sano ee Naqshad Xirfadeed
Alaabooyinkan taxanaha ah waxay la kulmaan UL adag, shahaadada CUL, oo ​​si badbaado leh loogu adeegsan karo isgaarsiinta saadka. Qalabka korontada ku shaqeeya, nidaamyada UPS Gawaarida korontada. qalabka caafimaadka AC/DC iwm ee warshadaha si baaxad leh iyo aagga ugu badan adduunka.
Isku -darka isku xiraha Awooda PA350
Isku -darka isku xiraha Awooda PA180
Isku -darka isku xiraha Awooda PA120
Isku -darka isku xiraha Awooda PA75
Isku -darka isku xiraha Awooda PA45
NBC Electronic Technologic Co., Ltd. (NBC) waxay ku saleysan tahay Magaalada Dongguan, Shiinaha, oo xafiisyo ku leh Shanghai, Dongguan (Nancheng), Hong Kong, iyo USA. Shirkadda sumcadda caanka ah ee shirkadda, ANEN, waa astaanta badbaadada badeecada, isku halaynta, iyo hufnaanta tamarta. NBC waa soosaaraha hormuudka ka ah qalabka elektiroonigga ah iyo isku xirayaasha awoodda. Waxaan la aasaasnay ​​xiriir lamaane muddo dheer leh oo leh sumado badan oo heer sare ah. Warshadeenu waxay dhaaftay ISO9001, ISO14001, IATF16949 shahaadooyinka.
Iyada oo la horumarinayo tiknoolajiyadda shaandhaynta korontada, tiknoolajiyadda shaandhayntu aad bay waxtar ugu leedahay xakamaynta faragelinta electromagnetic, gaar ahaan calaamadda EMI ee beddelidda korontada, taas oo kaalin fiican ka qaadan karta hagidda faragelinta iyo shucaaca faragelinta. Kala duwan ...
Xiriiriyaha awoodda wax iibsiga ma noqon karo qof dhammaystira, waxaa jira xiriirro badan, xirfadlayaal badan si ay uga qaybgalaan, qof si dhab ah u fahma awoodda tayada isku xiraha, isku xiraha istaagga ama dhicidda qayb kasta ayaa sameyn karta , dadka qaar baa haya qiimaha raashinka ...